किशोर नेपाल काठमाडौं, २७ माघ
1साताको सुरुवातदेखि कान्तिपुर शहरमा जाडो मत्थर भएको छ । जाडोको मौसम कहिलेसम्म सक्रिय हुन्छ ? मौसमविद्हरू शिवरात्रिसम्म जाडो नसकिने वाणी बोल्न चाहँदैनन् ।
यसको सट्टा उनीहरू प्रश्नकर्ताहरूलाई मोवाइलको वेदर एप हेर्ने सल्लाह दिन्छन् र घरतिर लम्किन्छन् । यस पटक जाडोको मौसम छिट्टै सक्रिय भएको थियो र पनि यसका गतिविधिका बारेमा औपचारिक सूचना ‘समयमा नै’ सङ्कलन गर्न भने ‘समय’ नै मिलेन । सञ्चारकर्मीका लागि अहिलेको काल, बेला, समय, परिस्थिति केही पनि ठीक छैन । त्यसमा पनि ‘स्वतन्त्र’ पत्रकारहरूको त कुरै नगरौँ । उनीहरूको न सडकमा गणना छ, न त सदनमा । स्वतन्त्र पत्रकारको त ‘जनता जान्न चाहन्छन्’ कार्यक्रमका ‘साउण्डम्यान’जतिकोे पनि भाउ छैन ।
जाडो त्यत्तिकै आएको थिएन । यस वर्ष मनसुन र जाडोका बीच कुनै सङ्क्रमणकाल थिएन । आन्दोलन सकिएर, गणतन्त्र स्थापना भएको १४ वर्षपछि, देशमा सङ्क्रमणकालीन न्यायको कुरा उठाइएको छ । कुरा उठाउने अभियन्ताहरू बितेका १४ वर्ष कुम्भकर्णको कुन रिसोर्टमा निदाइरहेका थिए ? कसैलाई थाहा छैन ।
अहिले आएर यी अभियन्ताहरू माओवादीका नेताहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेग पुर्‍याउने सपना देख्दै छन् । हेगमा माओवादीका नेताहरूलाई मात्र पुर्‍याइने हो कि सरकारी सेनाका नेताहरूलाई पनि घिसारिने हो, थाहा छैन ।
युद्धको व्यापार बडो घीनलाग्दो हुन्छ । मरेका मानिसको लास देखाएर क्षतिपूर्ति लिने यस धन्दामा नेपालका केही सपूतहरू लागेका छन् । यो त पैसा पाउनेका लागि पनि भाग्य नभएर दुर्भाग्य हो । उहिले अफगानिस्तानको जलालावाद हुँदै काबुलमा कब्जा जमाउने सपना देखेका थिए गुलबुद्दीन हिक्मतयारले । कति प्रयत्न गर्दा पनि त्यो सम्भव भएन ।
त्यसपछि गुलबुद्दीनका मानिसहरूले लासको धन्दा गर्न थाले । यो धन्दामा अमेरिकी र युरोपियन संलग्न थिए । त्यतिन्जेलसम्म सोभियत संघको विघटन भएको थिएन ।
यो उताको पुरानो कुरा भयो । यता, नेपालमा सधैँझैँ यस वर्ष पनि प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र वितरण र नवीकरणको चर्चाकै क्रममा मनसुन सुरु भइहाल्यो । मनसुन सुरु हुनेवित्तिकै देशका विभिन्न भागमा भीषण गडगडाहटका साथ बाढी पहिरो आउन थाल्यो । कति प्राणीको ज्यान गयो ।
मौसमविद्का अनुसार देशका लगभग सम्पूर्ण आकाशको चारैतिर वर्षा वाहक बादल मडारिएको थियो । त्यसपछि यो मौसम मधेसतिर सरेको थियो । यसको अर्थ देशैभर भीषण वर्षा, बाढी, पहिरो र विनाशको सम्भावना बढ्नु थियो । लमजुङमा दोर्दी खोलाले विनाश गरिसकेको थियो । दोर्दीको बाढीमा बगेर ४ जना काल कवलित भइसकेका थिए भने ७ जना बेपत्ता थिए । उनीहरूको पार्थिव शरीर फेला नपरेकाले मात्र घोषणा भएको थिएन ।
एकातिर बाढी पहिरोको चाप छ, अर्कोतिर प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्रको अभाव छ । यस्तोमा सङ्कलित सूचनाहरूको कुनै मूल्य स्थापित हुने त कुरै भएन । भएन भनेर मनमा ताप र चिन्ता लिएर पनि के गर्नु ? आफ्नो देश नै यस्तै छ ।
यहाँ राम्रो काम गर्ने, नराम्रो काम गर्ने सबै कुरा नियमबद्ध छन् । सरकारका पदाधिकारी र सल्लाहकारहरू कर्मचारी युनियनले जतासुकै अडङ्गा लगाएर देशको विकासमा गतिरोध आएको बताइरहेका भेटिन्छन् भने प्रधानमन्त्री केपी ओली कर्मचारी युनियन बन्द नहुने घोषणा गर्छन् ।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार यो आन्दोलनको समय होइन । विकास र समृद्धिको समय हो । भनेपछि प्रम ओलीले सुशासन, लोकतन्त्र र विकासप्रति प्रतिबद्ध सरकारले कर्मचारीको समस्यालाई सुनुवाइ र सम्बोधन गर्ने बताएका छन् ।
अब यो सरकार सुशासन, लोकतन्त्र र विकासप्रति प्रतिबद्ध छ कि छैन ? यो सोच्ने काम जनताको हो । धेरै पत्रकार र स्वतन्त्र पत्रकारका हातहातमा प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र नभएको अवस्थामा समस्याको समाधानमा पत्रकारले मध्यस्थता गर्ने ठाउँ नै पाउँदैन । यो नै हो देशको समस्या ।
बेलायतमा बोरिस जोन्सन नयाँ प्रधानमन्त्री भएका छन् । प्रम ओलीको सचिवालयका लागि यो अहिले जटिल विषय भएको छ । प्रम ओलीले गणतन्त्र नेपालका कार्यसूची अघिल्लो प्रधानमन्त्री टेरेसा मेलाई बुझाएर आएका छन् । अब उनले त्यो कार्यसूचीलाई कतै नेपालबाट प्राप्त ऐतिहासिक उपहार सम्झिएर घर लगेकी रहिछन् भने सम्बन्धित नेपाली कर्मचारी ठाडै निलम्बित हुने भइहाले ।
सरकारको जागिरे बन्नु अपजसिया काम हो । किनभने, यो नोकरी र चाकरी जति गरे पनि सरकारले सुन्दै सुन्दैन । नोकरी र चाकरी नगरेर अरू काम गर्न आफ्नो ल्याकत छैन । पढ्न त पढेको हो नि, मास्टरसम्म ।
ऊबेला ‘चिट’ गरेर पास गरेको कुरालाई अहिले बल्झाइँदै छ । आफूले पास गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पूरै फ्याकल्टी बदनामीको डोलमा जाकिएको छ ।
कर्मचारी र सञ्चारकर्मीको ग्रह कहिल्यै मिल्दैन । कर्मचारीले जे होइन भन्छन, त्यसैलाई हो भन्छन् सञ्चारकर्मी । सञ्चारकर्मीले जे बोल्छन् वा लेख्छन्, कर्मचारीले त्यसैलाई भ्रामक, कपोलकल्पित र घोर आपत्तिजनक मान्छन् ।
झगडा त्यति ठूलो पनि होइन । यो झगडाको कारण कर्मचारी र सञ्चारकर्मी दुवै सँगै खाजा नखाने पनि होइनन् । तर, सरकारको सिन्दूर लगाएका कर्मचारीको दिमागमा अलिकति तमस त रहन्छ नै । यो तमसलाई उदाहरण बनाएर कसैले केही गर्न सक्ने होइन । खाली पेटको कीरा मार्न एकआपसमा दोषारोपण गर्ने कुरा पनि त भएन ।
एक जना कर्मचारी भन्दै थिए, ‘अहिलेका लागि कर्मचारी र सञ्चारकर्मी भनेको ढुंगाको भर माटो र माटोको भर ढुंगा जस्तै हुन् ।’ देशभर सिंहदरबार पुगेपछिको यो समयमा देशमा कि जागिरदार कर्मचारी छन् कि सञ्चारकर्मी सल्लाहकार छन् ।
एकछिन मनसुनतिर टाउको फर्काउने हो भने देशको जुन दृश्य देखिन्छ, त्यसको बयान गर्नु सम्भव नै छैन । राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति उच्च आर्थिक वृद्धिमा केन्द्रित रहेका बेला असार अन्तिम साताको बाढीबाट पीडित मधेसका, खास गरेर, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी र रौतहटका, सयौँ परिवार अहिले पनि अस्थायी छप्परमुनि गुजारा गरिरहेका छन् । मानौँ, उनीहरू भुइँचालो पीडित हुन् ।
बाढीमा छप्परमुनिको अर्थ हिलोमा, चिसोमा पसारिनु हो । स्वास्थ्यका लागि यो हानिकारक त छँदै छ । यसले मानिसलाई तमासा भन्दा माथिल्लो खण्डमा राखेर देखाउँदा पनि देखाउँदैन । बाढीले मानिसलाई पानीमुनि पुर्‍याएर गाड्छ ।
एक समाचारअनुसार, सरकारले पोहोर साल अर्थात् २०७५ सालमा बनाएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण नीति अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन । त्यो नीति कार्यान्वयनमा ल्याए मात्रै पनि ५० प्रतिशत मानिसको ज्यान बच्ने थियो । अब यो नीति कार्यान्वयनमा किन ल्याइएन ? कसलाई सोध्ने, कसले जवाफ दिने ?
रमाइलो कुरा, सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउवाले सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा छलफल गर्दै संरचनागत परिवर्तनका कुरा उठाएका छन् । यो त पहिले नै उठाउनुपर्ने विषय थियो । यो राम्रो कुरा हो ।
अख्तियार आदिका कारणले सरकार र प्रतिपक्षका बीच सद्भाव देखाउने अरू ठाउँ सङ्कुचित भएको अवस्थामा कमसे कम बाढी–पहिरो, जाडो र आगलागी जस्ता प्रकोपहरूको आक्रमणका बेला सद्भाव देखिनु राम्रै हो ।
यहाँ मैले जे भनिरहेको छु, त्यो मौसमको मेलोडी हो । मेलोडी धून बजिरहेको समयमा कसैले पनि त्यसको विपरीत आवाज निकाल्न हुँदैन । हामी त अझ पानीसँग खेल्न नजानेका मानिस पर्‍यौँ, जसको देशले समुद्र देख्न सक्दैन ।
देशका जनता मनसुनमा रुन्छन् । भनसुनमा रमाउँछन् । भनसुनमा रमाउन सकेनन् भने तिनका आँसु मनसुनका पानीमा परिणत हुन्छन् ।
यो एउटा रिपोर्ताज हो– मौसमका मीठा धूनहरूको !
प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ २७, २०७६, ०१:५५:००